Afọ 5 gara aga ụfọdụ isi distros | Site na Linux
Afọ 5 gara aga nke ụfọdụ nnukwu distros
Ọ bụ ezie na aha ahụ na-ada ụda nhọrọ, enyi anyị Juan Carlos Ortiz ewerela mgbagha ndị a dị ka ndị dị na ndị a afọ iri atọ gara aga nwere a na-eduga ọrụ na ụwa GNU / Linux, ọ bụghị naanị n'ihi na ha na-ewu ewu, kamakwa n'ihi na ha bụ (ma ọ bụ bụ) ndị dị arọ nke na obere obere na-agbanwe ụwa nke penguuin.
Usoro nke distros bụ naanị ihe na-enweghị usoro, ọ bụghị ka ọ bụrụ ọkwa nke ọnọdụ, ma pere mpe itinye otu usoro karịa ọzọ.
Rosfọdụ distros dị oke mkpa etinyebeghị n'ihi enweghị oge ahapụla nyocha a: Arch Linux, Debian, Slackware, Sabayon, PCLinuxOS, Gentoo, na ndị ọzọ. Ikekwe mgbe e mesịrị, anyị ga-etinye ha na akụkụ nke abụọ nke isiokwu a.
2 Mint Linux
3 Red okpu Enterprise Linux (RHEL)
2007: Ubuntu 7.04 Feisty Fawn wepụtara, onye izizi nwere nkwado asụsụ Asụsụ, yana 7.10 Gutsy Gibbon. Ubuntu meriri InfoWorld Bossie Award maka Best Open Source Client OS; ya ewu ewu na-abawanye na GNU / Linux ụwa wee malite ịpụta dị ka ụwa na-eto ngwa ngwa.
2008: Ubuntu 8.04 Hardy Heron (LTS) na 8.10 Intrepid Ibex weputara. PCWorld kwuru Ubuntu dị ka "nkesa Linux kachasị mma dị ugbu a"
2009: Ntọhapụ nke Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalop nke na-agbakwunye ext4 dị ka sistemụ faịlụ maka ntinye na nkwado maka ndị na-arụ ọrụ ARM, yana 9.10 Karmic Koala, nke ejiri rụọ ọrụ Ubuntu Software Center, nke na-enye ohere iji nchịkọta niile jikwaa nke ọma. . Versionsdị nsụgharị ndị a ga-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ nke Ubuntu dịkwuo elu, na-ewetara ya nke ọma nso ọnọdụ nke nkesa kachasị ewu ewu ma nwee ndị ọrụ 13 nde nọ n'ọrụ nwere mmụba dị elu karịa nkesa ọ bụla ọzọ. Google gosiputara na ihe kariri ndi oru 20.000 jiri Ubuntu gbanwere ugha na oru ha kwa ubochi. National Gendarmerie nke savestali na-echekwa 70% nke mmefu ego IT site na ịgbanwere ebe ọrụ 5000 na Ubuntu; na Macedonia, Ministri nke Mmụta na Sayensị nyefere Ubuntu ihe karịrị kọmputa 180.000.
2010: Ubuntu 10.04 Lucid Lynx (LTS) wepụtara, nke chọrọ iji belata oge buut, mezigharị ụlọ ọrụ Software, ma melite nkwụsi ike usoro niile. Na mgbakwunye, etinyere ihe nrụnye ahụ nke ọma, na-agbakwunye slide. Ntọhapụ nke nsụgharị 10.10 Maveric Meerkat gbakwunyere btrfs na sistemụ faịlụ ma dozie nsogbu ụfọdụ na-arụ ọrụ na ahụhụ nke Unity, mana ọ ga-ewe ogologo oge maka obodo iji mee ya. Agbanwe ụlọ ọrụ site na OpenOffice ka ọ bụrụ LibreOffice.
2011: Ubuntu 11.04 Natty Narwhal na 11.10 Oneiric Ocelote wepụtara. A na-agbakwunye ịdị n'otu dị ka ọnọdụ GUI ndabara, dochie GNOME, nke na-akpata ọpụpụ dị ukwuu nke ndị ọrụ. Ntinye nke ngwa etinyere na Qt na nhazi nke nhazi nke Qt na GTK mara ọkwa. E wepụrụ ọtụtụ nsụgharị, na-ahapụ naanị aha 'Ubuntu' maka ojiji na kọmputa niile, yana 'Ubuntu Server' maka ojiji na sava. A na-ekwupụta njikọta Ubuntu na ụdị mbadamba, telivishọn, ekwentị na ngwaọrụ ndị ọzọ maka mbipute 14.04 (Eprel 2014). Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ dịka Cannonical dị ihe dịka nde 20. N'agbanyeghị nke ahụ, Ubuntu tụfuru ebe kachasị elu na ogo Distrowatch na Linux Mint maka oge mbụ n'ime afọ. Ubuntu Server na-ebili ruo ebe nke anọ n'etiti nkesa Linux kachasị eji eme ihe maka sava.
2012: Ubuntu 12.04 Precise Pangolin (LTS) wepụtara. E gosipụtara Ubuntu TV na CES, na-enye ohere njikwa nke ọdịnaya na ọrụ na telivishọn. Ekwuputara 'Ubuntu maka gam akporo' nke na-enye gị ohere isi na desktọọpụ Ubuntu site na ama ọ bụla gam akporo ama. Esemokwu banyere usoro UEFI nke Microsoft mebere maka Windows 8, Cannonical kpebiri ịmepụta igodo ya dị ka ihe ọzọ, nke ruru nnabata nke FSF. Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal na-amalite site na nnweta ụdị mbụ Alfa.
Análisis: Obi abụọ adịghị ya, Ubuntu bụ ntụpọ kachasị maka uto nke ụwa GNU / Linux. Na enweghị ihe ọ bụla ị ga-enwe anyaụfụ na Windows, ọtụtụ nnabata nke ndị ọrụ Redmond OS ochie agabigala na Cannonical distro na-enweghị ndị na-etiti ya na uto ya kemgbe ọtụtụ afọ bụkwa ngosipụta nke eziokwu na a na-agba ọtụtụ ndị ọrụ ume ịmara na Linux bụkwa ụwa nke nwere ike igbo mkpa gị.
Ka oge na-aga, Ubuntu na-emeziwanye, na-agbakwunye nkwado ngwaike, na-ekepụta ngwa ọrụ na-akwado njikwa, na-eme ka eserese ahụ dị elu, na-agbasa ahịa ya na mpaghara ndị ọzọ, na -emepụta obodo siri ike na nnukwu. Ikekwe nnukwu ọdịda ya abịawo na ntinye nke ịdị n'otu, gburugburu nke were ọtụtụ mberede na ọtụtụ mwakpo na mbido wee bute "ọpụpụ" ahụ maka ihu ndị ọzọ. Ndị ọrụ ndị ọzọ enweela mmasị na Unity ma ọ bụ gbanwee gburugburu ebe nkiri.
Kedu ihe ga-eme n'ọdịnihu? Mgbasawanye na ahịa ndị ọzọ nke Cannonical na-ezube maka nkesa ya nwere ike gbanwee nguzozi iji gbanwee Ubuntu n'ime ọkacha mmasị ọzọ, ọ bụ ezie na taa ọ nwere ọtụtụ ndị ọrụ. Ihe a niile ga-adabere na ịtụle mmetụta nke mkpebi ọ bụla emere na nkwado nke obodo gị.
2007: Ntọhapụ nke nsụgharị 2.2 "Bianca", 3.0 "Cassandra", 3.1 "Celena" na 4.0 "Daryna", nke ikpeazụ a na-agbakwunye maka oge mbụ KDE dị ka ihe ọzọ na GNOME na ngwugwu ya niile, yana ọtụtụ ngwaọrụ dị mkpa dị ka mintUpdate na mintDesktop ma kọwaa desktọọpụ nke ga-abụ ụkpụrụ Mint site ugbu a gaa n'ihu, ịkụ nzọ na njiri ọrụ. Cassandra na-agbakwunye mmetụta "cube" a ma ama iji gbanwee n'etiti tebụl.
2008: Mwepụta nke nsụgharị 5 "Elyssa" na 6 "Felicia". A na-agbanwe ijeụkwụ nke mmepe gaa na mbipụta abụọ kwa afọ, dịka Ubuntu, bụ isi Linux Mint na-ekesa. Elyssa bụ onye izizi gbakwunye ọtụtụ asụsụ, nkwado maka ụkpụrụ ụlọ x86_64 na, ebe ọ bụ LTS, ọ ga-abụ nsụgharị a na-ejikarị eme ihe na obodo ruo ọtụtụ afọ.
2009: Mwepụta nke nsụgharị 7 "Gloria" na 8 "Helena". Gloria na-ewebata nkwado ext4 na nnukwu mgbanwe ọrụ nka, nke ga - enyere aka ịiche onwe ya na Ubuntu ma gosipụta ụdịrị enyi. Helena na-ewebata mmụba ama ama na GDM mintUpdate, mintInstall, mintUpload, mintBachup na onye njikwa sọftụwia, ngwa ọrụ nke ga - eji oge ga - abụ ike dị na mmalite ọ bụla. A na-agbakwunye Grub2 na OEM mbipute
2010: Mwepụta nke nsụgharị 9 "Isadora" LTS na 10 "Julia". LMDE 201012 weputara, ihe ntinye Linux Linux Mint nke Debian na-agbakwunye na Debian ma o bughi na isi Mint mbipute. Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ sitere na nkesa ndị ọzọ na-abawanye n'ọtụtụ buru ibu, Mint malitere ịmalite ewu ewu. A na-akpọsa mwepụta nke nsụgharị yana desktọọpụ ndị ọzọ na GNOME, dị ka KDE, XFCE ma ọ bụ Fluxbox (ọ bụ ezie na tupu enwee ụdị "obodo" nke gburugburu ndị a)
2011: Mwepụta nke mbipute 11 "Katya", nke a na-eyi egwu na mbụ site na ntọhapụ nke GNOME 3; ekpebiri ya ịnọgide na-eji GNOME 2 mana a gbara ya ume ịchọta ụzọ ọzọ na-enye ohere iji chekwaa njirimara ya. Ejiri LibreOffice dochie OpenOffice. Na njedebe Katya ghọrọ otu n'ime nkesa kachasị aga nke ọma na akụkọ Mint, ọganiihu nke onye na-anọchi ya agaghị agabiga. Nke 5 Elyssa na-abịa na njedebe nke ndụ ya dịka LTS. Na njedebe nke afọ a tọhapụrụ 12 "Lisa", nke na-agbakwunye MATE dị ka ebe eserese eserese iji dochie GNOME 3. Mwepụta nke LMDE 201104 na 201109. Ndị ọrụ Linux Mint na-ebupụta Cinnamon na eze, ndụdụ nke GNOME 2 nke ga-abụkwa dị maka nkesa ndị ọzọ dịka Fedora, Ubuntu, OpenSUSE ma ọ bụ CentOS n'etiti ndị ọzọ. Linux Mint na-anọchi Ubuntu na ọkwa nke ibe nke Distrowatch, na-egosi na Mint na-ewu ewu na-ewu ewu; ọ bụ oge mbụ n'ime afọ na Ubuntu furu ụzọ mbụ
2012: Mwepụta nke nsụgharị 13 "Maya" na LMDE 201204. Na mmekorita ya na CompuLab, MintBox malitere, obere kọmputa nke otu modem na nke gụnyere Linux Mint dị ka sistemụ arụmọrụ. Maya gụnyere MDM, dochie GDM dị ka njikwa nbanye; Otu ọnwa mgbe ebuputachara ya, ụlọ ọrụ dị iche iche kọwara ya dịka "otu n'ime nkesa kachasị mma na ịrụ ọrụ na ụwa GNU / Linux." Mmepụta nke nsụgharị 14 na-ezube, na-enweghị aha koodu n'oge ahụ ma dabere na ntọhapụ Ubuntu 12.10 na-esote
Análisis: Linux Mint na-anọchite anya ezigbo ihe atụ nke otu distro nwere ike isi site na ịbụ otu n'ime "ikpo" ka ọ nọrọ na elu nke nkesa ndị kachasị ewu ewu, na-echefughị ​​na mbido Mint bụ naanị ibe weebụ! Ọ bụ n'ezie afọ 5 na-amị mkpụrụ nke ukwuu maka distro nke dị obere, onye ntọhapụ mbụ ya bụ Ada, mbipute 1.0 na 2006. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ga-ekwu na ọnọdụ Mint ugbu a bụ n'ihi mbugharị nke ndị ọrụ si Ubuntu n'ihi nnabata. si Unty, nke a abụghị eziokwu kpamkpam, ebe ọ ga-ewepụ Mint.
Ndị ọrụ gosipụtara Mint maka afọ ole na ole maka ntinye nke multimedia na java codecs, LiveDị impeccable ya, ọtụtụ ngwa ọrụ ya yana gburugburu ebe obibi eserese nke agbadoro mgbe niile iji dị mfe. Na mbu ejiri m GNOME, na mgbe ewepụtara ụdị nke 3 nke gburugburu ebe a, ekpebiri idobe Cinnamon na MATE, ndụdụ abụọ na-enye ohere ka echekwa ihe nke GNOME n'ụzọ ụfọdụ na 2 mbipute ya. Mkpebi ndị a niile enweela ihe ịga nke ọma tumadi n’ihi na ndị mmepe ji n’aka na ha na ndị ọrụ ha nwere nkwukọrịta dị mma, nke na-abụkarị mgbakwunye.
N'ịga n'ihu, Mint kwesịrị ịgbaso usoro iwu ya: mee ka distro dị mfe ma dị ike yana ndị ọrụ ya nwere obi ụtọ. Nke a bụ ihe ọnọdụ ya ugbu a kwesịrị, ọ bụ ezie na ọ nweghị uto ngwa ngwa dịka Ubuntu, mmepe nke nkesa ya enweghị ihe ọ bụla ga-enwe anyaụfụ na usoro Cannonical.
Red okpu Enterprise Linux (RHEL)
2007Nkeji edemede 5. Naputara Jim Whitehurst akpọrọ Red Hat President na CEO; Matthew Szulik gara n'ihu dị ka Onye isi ala nke Red Hat. N'afọ nke anọ a na-akpọ Red Hat aha ya bụ Kasị ntụkwasị obi Software na-ere. A tọhapụrụ RHEL 5.1
2008: RHEL 5 Wins Gold dị ka Ngwaahịa nke Afọ site na SearchEnterpriseLinux.com na ngalaba nkesa Linux Server maka njikwa ya na njikwa. Red Hat gụnyere na Forbes ndepụta nke ụlọ ọrụ teknụzụ 25 na-eto ngwa ngwa. Ọwa Insider Aha Red Hat Enterprise Linux Product of the Year 2008. RHEL 5.2 Hapụ
2009: RHEL 5.3 wepụtara. A tọhapụrụ RHEL 5.4, na-etinye teknụzụ arụmọrụ nke kernel (KVM) na teknụzụ nke Xen maka oge mbụ. Maka oge mbụ RHEL na Windows nwere ike itinye ọnụ site na njikwa, dị ka onye ọbịa ma ọ bụ dị ka ọbịa, yana nkwado zuru oke site na ụlọ ọrụ abụọ ahụ.
2010: Mwepụta nke 6, nke na-enyere aka iche echiche banyere ọdịnihu nke ọrụ dị na igwe ojii. Ngwaọrụ nnweta Red Hat Cloud na-enyere onye ọrụ ọ bụla aka ịgbatị ndenye aha RHEL ha na igwe ojii na mfe.
2011: Mwepụta nke nsụgharị 6.1 na 6.2, na-enweta ihe ndekọ njirimara na ndakọrịta na ngwaahịa SAP. Ndebanye aha RHEL 2.5 ruru ruru
2012: Red Hat na-ekwuwapụta na ọ ga-agbatị nkwado nke RHEL 5 na 6 site na afọ 7 ruo 10. Esemokwu banyere usoro UEFI nke Microsoft mebere maka Windows 8, Red Hat na Cannonical na-eme mkpebi dị iche iche.
AnálisisỌnọdụ Red Hat na ahịa kọmpụta dị ezigbo mma, mana ọ bụghị mpako na monopolistic dị ka Microsoft, Red Hat na-enweta iru eru a site na ogo ngwaahịa ya na nkwado ọ na-enye ndị ahịa ya. Anyị enweghị ike iche n'echiche niile nke asambodo na ndekọ nke ụlọ ọrụ a nwere, yana ọbụlagodi ọnụ ọgụgụ ndị ahịa ọ nwere (naanị ịkpọ aha NASA na IBM zuru ezu maka anyị) Ndị anyị na-anaghị eji RHEL eme ihe nwere ike ịnwe echiche na-apụ apụ nke ihe niile ọ na-anọchite anya ya , ma o doro anya na ọ bụ nkesa nke nnukwu mma nwere nkwado onwe onye, ​​ijikọta ya na ngwaahịa ndị ọzọ ngwa yana usoro nke kacha mma na ụwa Linux.
Ikekwe uto kasịnụ nke RHEL anyị na-ahụ n'akụkụ azụmaahịa, ebe ọ bụ na ọ bụ mpaghara a ebe nchekwa na ike siri ike kachasị mkpa. Industrylọ ọrụ desktọọpụ nwere ike ọ gaghị eto site na nkwụsị na oke, mana Red Hat ga-anọgide na-enye RHEL na mmepe ya na-aga n'ihu.
2007: Site na mwepụta nke Fedora 7 "Moonshine", Core na Extras repositories jikọtara, yana ngwaọrụ ọhụrụ iji jikwaa ngwugwu ha. Na Nọmba Nọvemba mbipute 8 "Werewolf" ka ewepụtara, nke a na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ dịka ntinye nke Iced Tea, Codec Buddy na Pulse Audio; Fedora ghọrọ nkesa izizi iji nweta Pulse Audio nke ndabara.
2008: Fedora 9 "Sulfur" na-enye ezigbo atụmatụ na nkwalite nke obodo. Fedora 10 «Cambridge» na-eweta dị ka isi ihe bụ Plymouth bootloader, dochie RHGB (Red Hat Graphical Boot)
2009: Version 11 "Leonidas" na-eweta mmụba dị ukwuu na mmalite sistemụ na mmechi (20 sekọnd buut oge iji ntinye onye ọrụ), nkwado nyocha akara mkpisi aka, yum na nkwalite ngwugwu, na nkwado maka sistemụ faịlụ ext4. Fedora 12 "Constantine" na-agbakwunye mmelite dị ukwuu na grub nke na-enye ohere ka akụkụ nke ext4 mata, n'agbanyeghị na akwadoro nkwado a na mbụ, grub mepụtara obere nkebi ext2 / ext3 mgbe ị na-etinye usoro. A gbakwunyere nkwado zuru oke maka asụsụ ndị Eshia.
2010: Fedora 13 "Goddard" na - agbakwunye mmelite RPM nke na - emezi njikwa ngwugwu site na 30%, mmezi 3D maka kaadị Nvidia. A tọhapụrụ nsụgharị 14 "Laughlin" na nke mbụ ya na igwe ojii Amazon EC2, atụmatụ nke ụdị nke ugbu a na-aga n'ihu na-ejigide, gụnyere mmelite n'ọtụtụ nchịkọta mmepe na ọba akwụkwọ usoro.
2011: Ntọhapụ nke Fedora 15 "Lovelock" gụnyere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke nkwalite n'ọtụtụ afọ, na-enweta ya mmụba dị ukwuu na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ yana ọkwa mgbasa ozi magburu onwe ya. Free Office gụnyere gụnyere dochie Open Office, ngwaọrụ ndị na-eme ihe ngosi, mmelite nke gburugburu eserese gụnyere XFCE na LXDE, mmelite na sistemụ sistemụ sistemụ na ọsọ. Fedora 16 "Verne" na-agbakwunye ngwaọrụ iji rụọ ọrụ igwe ojii, mmelite na grub 2 na HAL wepụrụ, melite ngwaọrụ mmepe na melite kernel na 3.1.0. E hiwere ọrụ weebụ a na-akpọ "Jụọ Fedora" nke na-arụ ọrụ dị ka ọnụ ụzọ maka ikpochapụ ajụjụ na obi abụọ nke obodo na ndị ọrụ ahụ nwere ike ịza ha.
2012: Versiondị kachasị ọhụrụ ewepụtara bụ "Beefy Miracle" 17, yana atụmatụ ndị dị ka kernel 3.4.1, GNOME 3.4, KDE 4.8, ndozi na Network Managaer, ndakọrịta na ihuenyo mmetụ na nnọchi nke iptable site na firewalld. Versionsdị ndị ka nwere nkwado bụ 16-17; Fedora 18 "Spherical Cow" na-atụ anya ịhapụ na Nọvemba afọ a
Análisis: Mkpụrụ akwụkwọ Fedora bụ “Nnwere Onwe. Ọbụbụenyi. Atụmatụ ”, ma ọ ga-ezute ogige ndị a. Dabere na koodu ntinye nke Red Hat nyere, Fedora na-enye sistemụ arụmọrụ obodo nke na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ omume ọma nke ngwanrọ n'efu, na-akpọtụrụ nnukwu obodo ma nwee obi ụtọ, ma nwee ọtụtụ ngwaọrụ dị iji kwado ọrụ PC anyị. .
Ikekwe uto nke Fedora agbasaghị ngwa ngwa dị ka nkesa ndị ọzọ, mana uto ya anaghị akwụsị akwụsị, ọ na-aga n'ihu na-akawanye mma na ntọhapụ ọ bụla ma na-aga n'ihu na-ejide, mgbe afọ 9 nke akụkọ ntolite, otu ebe n'etiti nkesa kachasị mkpa na GNU ụwa / Linux. Otu n'ime isi ihe ndị ọrụ nkesa ndị ọzọ katọrọ bụ usoro nkwado dị mkpụmkpụ nke enyere ụdị ọ bụla na ụfọdụ mgbanwe enyere na sistemụ faịlụ n'etiti otu ntọhapụ na nke ọzọ, n'agbanyeghị na nke a emeela ọtụtụ oge. iji melite ndakọrịta na njikwa.
Echiche m bụ na a mụrụ Fedora ka ọ nọrọ: ịbụ oru obodo ma nyekwa nnweta ịhọrọ n'etiti ọtụtụ Spins, Formats na Desktops ọ doro anya na uto ya ga-adị ukwuu ma karịa. Ka afọ na-aga, ọ ga na-enwe ihe ịga nke ọma ọ na-akwakọba kemgbe ọtụtụ afọ.
2007: Mandriva 2007 (nke ewepụtara n'ezie na mbubreyo 2006) na-adọta ebili nke ndị ọrụ ọhụụ, na-abawanye ọfụma ya, ma na-agụnye atụmatụ ọhụrụ dịka usoro nkesa USB (Mandriva Flash) na LiveCD. 2007.1dị 6 bụ "Mmiri" mbụ, nke na-agbanwe usoro mmepe rue ọnwa 2008.0; Compiz na Beryl, MandrivaUpdate, MandrivaOnline, na DrakRPM gụnyere. Mandriva XNUMX na-agbakwụnye ngwa ọrụ Mbugharị Windows / Linux ọhụrụ: transfugedrake.
2008: Version 2008.1 na-emezi nkwado a site na ịnyere Windows Vista Mbugharị. Ntọhapụ 2009.0 na-agbakwunye nkwado ngwaike na ntinye miri emi na KDE na LXDE. Nke a na nke na-esote ndị obodo ahụ hoputara ụdị nsụgharị kachasị mma.
2009: Mandriva 2009.1 na-agbakwunye nkwado ext4 na teknụzụ Speedbot ọhụrụ. Na 2010, akpọrọ Adelie, juputara na ndozi na mgbanwe: nchekwa ka ukwuu, ndakọrịta na gburugburu eserese eserese, agbakwunyere akaụntụ ndị ọbịa, nnukwu njikọta na Linux Mobile version, ndozi na URPM na urpmi.
2010: Ntọhapụ nke mbipute 2010.1 ("Farman") adịghị eweta ezigbo mmelite, naanị melite ngwugwu. Mmepe okirikiri na-ebipụ ma ọ laghachiri afọ 1, na-egbochi distro na ịhapụ mmelite naanị. Asịrị nke ire nke Mandriva na-etinye ọrụ nke ndị ọrụ ya n'ihe egwu (ọkachasị isi na Brazil na France) ma na-atụba obodo ahụ igwe ojii nke amaghị ihe ọ bụla; ọnọdụ dị jụụ na ọbịbịa nke ndị na-etinye ego ọhụrụ. Fọdụ ndị mmepe kewara wee malite mmepe nke Mageia n'akụkụ ndị ọrụ na-eche maka ọdịnihu nke onye bu ya ụzọ.
2011: RC mbụ nke nsụgharị 2011.0 ("Hydrogen") na-eweghachi olileanya na Mandriva, na nsụgharị ikpeazụ na-eweta ihe ọhụrụ dị n'etiti nke MandrivaSync pụtara, ọrụ iji mekọrịta data. Na njedebe nke afọ ụlọ ọrụ ahụ chọtara onwe ya n'ọnọdụ ọnọdụ akụ na ụba siri ike, ebe ndị na-etinye ego na-eyi egwu ịdọrọ nkwado ego ma ọ bụrụ na achọtaghị ihe ngwọta yana enwere ike ịme ụgwọ ma ọ bụ ire ere nye onye na-ere ahịa kachasị elu.
2012: Mgbe ọtụtụ "ultimatums" site investors ego na-eyigharịrị yigharịrị; ụfọdụ ndị na-emepụta ihe ọhụrụ sonyere mmepe nke ndụdụ ọhụrụ nke Mandriva, ROSA Marathon 2012. N'agbanyeghị ọkụ ọhụrụ ahụ, ụfọdụ ndị ọrụ gbara arụkwaghịm n'ihi ọnwụ nke Edge-IT, ngalaba nke were ọtụtụ ndị mmepe ọrụ. Enabataghachiri nke Mandriva, etolite ntọala ma nyefee obodo ahụ. A malitere "Tech Preview" nke mbipute 2012, nke akpọrọ "Bernie Lomax". Ntọala ahụ na-ebupụta nyocha ịntanetị na-emeghe iji họrọ aha ọhụrụ nke nkesa.
Análisis: Ihe ọhụrụ nke Mandriva dị ka ihe dị ike, na-arụ ọrụ na onye ọrụ enyi na-arụ ọrụ yiri ka ọ ga-ahapụ, ọ bụghị naanị n'ihi nbelata ogo, mana n'ihi na elebara anya na nsogbu ndị ọ chere ihu ma na-aga n'ihu. Afọ ole na ole gara aga, a ghọtara ya dị ka onye na-enweghị mgbagha nke kachasị elu nke 10 kacha mma maka nkesa Linux; taa o yiri ka ọ dị n'oké osimiri nke ebili mmiri na-agbanwe. Mandriva maara otu esi agbanwe ihe mgbe ọ bịara na nkwado ngwaike, yana akụkụ buru ibu nke arịrịọ ya nwere inwe distro a haziri nke ọma, yana ọtụtụ sọftụwia na ngwaọrụ yana ike siri ike kpam kpam na ọnọdụ akụ na ụba ya.
Inye mmepe na obodo nwere ike ime ka ọnọdụ ahụ ka mma. Agbanyeghị, n'oge ọgba aghara ya, ọtụtụ ndị ọrụ kwagara na nkesa ndị ọzọ na-achọ ịga n'ihu, na iweghachite ha agaghị abụ ọrụ dị mfe maka ezigbo ụzọ ndị ọzọ dị taa. Maka ugbu a, afọ a ga-achọ iweghachi ebube nke nsụgharị 2009 na 2009.1, ikekwe ihe kachasị elu na akụkọ ihe mere eme nke Mandriva. Ma nke a ga-enweta ma ọ bụ na ọ gaghị enwetaghị dabere na otu esi ahazi obodo na ntọala ọhụrụ yana ma enwere ike idozi esemokwu ahụ gbara gburugburu oke nkesa a.
2010: N'ọnwa Ọktọba, otu ndị mmepe nke mbụ Mandriva na ụfọdụ ndị ọrụ kwupụtara ọkwa nke ntọala Mageia, n'otu oge ahụ ekwuputara akụkọ banyere mmiri mmiri Edge-IT. Ndi otu ohuru kwuputara okike nke otu aha ma kwue na "ha achoghi ịdabere na ngbanwe onodu aku na uba ma obu na mmeghari uzo na enweghi nkọwa site n'aka ulo oru." A na-akọwapụta ihe atụ siri ike nke ọrụ obodo na mmepe.
2011- Mageia 2011 weputara na June 1, ya na onyonyo nbudata puru iche maka uzo ohuru. Establish na-eguzobe obodo siri ike ma ị nweta ọtụtụ nzaghachi sitere n'aka ndị ọrụ. A na-etolite usoro mmepe ọnwa 9 site na nkwado ọnwa 18 maka ụdị ọ bụla
2012: A na-ewepụta ọtụtụ ụdị alpha na beta nke abụọ. Mgbe Mandriva laghachiri na obodo, a na-enye Mageia enyemaka ya ma na-ekwukwa na ọ nwere ike ịmekọrịta ọrụ. Ndị mmepe Mageia jụrụ ọkpụkpọ oku na ụbọchị ole na ole ka e mesịrị, mwepụta ikpeazụ nke Mageia 2 ka a na-eme, na-enye nkwụsi ike ka ukwuu na karịa ngwugwu 10.000 na ebe nchekwa. E depụtara atụmatụ maka Mageia 3.
AnálisisN'agbanyeghị na ọ nwere naanị afọ 3 nke akụkọ ntolite, Mageia nwetara ebe a na ndepụta a. Karịsịa n'ihi ọgba aghara ọ malitere site na ịbụ onye "nọchiri anya" onye nọchiri Mandriva n'oge ụfọdụ mgbe ekwuru na distro nọ n'ihe egwu n'ihi nsogbu dị iche iche. N'ịhapụ agha ahụ, Mageia Foundation lekwasịrị anya n'ịmepụta usoro nke ya nke ga-emeghere obodo ahụ, nke Mandriva ga-emesị mee iji dịrị ndụ.
Mageia bụ ezigbo nkesa. Versiondị nke abụọ meziri ọtụtụ nsogbu nke nwa mbụ nwere, ma mụbaa ndepụta nke ngwanrọ na ebe nchekwa ya na ihe ngwaike akwadoro; Ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị gburugburu ebe obibi eserese, KDE dabara n'ụzọ zuru oke na Mageia, na-enye ọmarịcha ahụmịhe onye ọrụ.
Ihe niile na-egosi na Mageia ga-aga n'ihu na-adọta ndị ọrụ ọhụụ ma lekwasị anya na ịmeziwanye nkesa ya, n'agbanyeghị agbanyeghị izu oke, jiri oge ọjọọ nke Mandriva mee ka ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ rịa elu.
2007: Hapụ na October nke mbipute 10.3 lekwasịrị anya na nyochagharị nke ngwungwu nbudata (na-agbakwunye nkwado maka 1-Pịa Wụnye), nkwado iwu maka Fluendo MP3 na mmelite na oge nnweta.
2008: Version 11.0 na-amalite itinye ọtụtụ nhọrọ nbudata na desktọọpụ dị iche iche; emeziwanye na usoro nke ọsọ ọsọ. OpenSUSE 11.1 dị na njedebe nke afọ, mgbe emesịrị ịhapụ nkwupụta na oge ga-abanye ebe naanị mmelite ga-ahapụ.
2009: Na Nọvemba, mbipute 11.2 ka emesịrị bipụtara, nke na-agbakwunye ndozi dị mkpa dịka ext4 na nkwado PowerPC, KDE dị ka ebe eserese eserese, na-ahapụ GNOME dịka nhọrọ, ohere ibudata na netwọkụ (faịlụ 150 MB nke na-enye ohere ibudata ihe ndị ọzọ echichi faịlụ site na ịntanetị).
2010: OpenSUSE 11.3 wepụtara na Julaị, ọ bụ nsụgharị ama ama n'etiti ndị ọrụ yana so na nsụgharị ndị kachasị elu site na kọmputa. Mmekọrịta Netbook dịwanye mma, agbakwunye desktọọpụ desktọọpụ agbakwunye 2 (Meego na OpenSUSE na KDE's Plasma Netbook Workspace), nnwale nnwale na nkwado JFS, nkwado ngwaọrụ mkpanaka, mgbakwunye nke sava na ngwa ọrụ mmepe, melite nke Ọnọdụ eserese 4 (KDE, GNOME, XFCE, LXDE), tinyere ụdị nkuzi ọhụụ.
2011: Mwepụta nke 11.4 nke mbipute, yana mmelite ngwugwu na obere ndozi, na nsụgharị 12.1, nke na-enwetaghị ihe ịga nke ọma nke onye bu ya ụzọ. Mmezi na ụdị nke kachasị ọhụrụ gụnyere ndochi nke Open Office site na Libre Office, KDE Plasma na KDE, WebYaST na OwnCloud maka njikwa netwọkụ na ịchachasị YaST GUI na KDE.
2012: Ntọhapụ nke mbipute 12.2 na-egbu oge ma na-akpata enweghị afọ ojuju obodo. N'agbanyeghị nke a, ọnụọgụ nke nbudata nke mbipute 12.1 na-abawanye, ọnụọgụ nchịkọta na ebe nchekwa na-abawanye. RC nke 12.2 dị ugbu a
Análisis: Dị ka onye ọrụ OpenSUSE ahụrụ m omume ọma na ntụpọ nke nkesa a ma taa achọtara m onwe m yana sistemụ zuru oke na nke enyi iji. N'agbanyeghị nke a, obere ihe ịsụ ngọngọ nke na-ewere ọnọdụ na-egosi na mmepe dị ka ọ ghagola, n'agbanyeghị na nke a abụghị eziokwu kpamkpam.
O doro anya na OpenSUSE enwetawo nkwanye ùgwù na GNU / Linux ụwa maka igosipụta mmepe na-enweghị atụ nke gosipụtara na sistemụ nchekwa na nke siri ike na-enweghị nleghara iji ọrụ ma ọ bụ nchacha anya na gburugburu ebe obibi, nke a bụ otu ihe kpatara o ji nwee dọtara ọtụtụ ndị ọrụ. Site n'igosi otutu uzo ozo iji site na usoro ntinye ya di iche iche, desktọọpụ dị iche iche, ụlọ ọrụ Factory na Tumbleweed na ọbụlagodi SUSE Studio, onye ọrụ nwere ohere niile iji wuo nkesa ha dịka ọ kacha amasị ha. Nnwere onwe ojiji a, nke a na-ahụghị n'ọtụtụ ọgba aghara, na-agba ume ka ndị ọrụ ya na-eto kwa ụbọchị.
Na nchịkọta, ọ bụ ezie na ọ dịbeghị oke nkesa, OpenSUSE na-ebute ụzọ mgbe niile ma bụrụkwa ihe atụ ọzọ nke ịga nke ọma na ike nke GNU / Linux ụwa na-enye anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Afọ 5 gara aga nke ụfọdụ nnukwu distros
Jaume Torres Ortega dijo
ihe ohuru na Linux eji m kubutu ihe dika onwa ato, m na eche echiche igbanwe na nkesa ozo, gini ka i na adum?
Zaghachi Jaume Torres Ortega
Juan Pablo Jaramillo Pineda dijo
Kwezuo. Kedu ka Debian GNU / Linux anaghị eme? Oo
Zaghachi Juan Pablo Jaramillo Pineda
Josue Aquino dijo
na debian na arch? 😐
Zaghachi Josue Aquino
Arch anaghị eguzosi ike, ọ bụ ezie na ọ na-ewute ya, ị ga-enyefe onwe gị n'aka chi niile ma gafee mkpịsị aka gị ka ihe niile na-arụ ọrụ na mmelite ọ bụla, mana ọ dị mma maka ndị nwere oge iji nyochaa wiki na forum ha mara mma.
Edepụtara Mageia maka mmetụta nke ọkwa ya na mwepụta ya, yana uto pụrụ iche maka distro dị mkpụmkpụ. Ọ bụrụ na ewepụtaghị distro ahụ ị kpọtụrụ aha, kedụ otu ị ga-esi tụọ anya na ọ ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ụwa GNU / Linux? A na-enwe ekele maka echiche gị, enwere dichotomy n'ezie na ihe ịgụnye ma ọ bụ wepu nke a ma ọ bụ distro ahụ, mana ọ bụ naanị nyocha onwe onye, ​​ọ bụ echiche gị, ọ nweghị ihe ọzọ. Cheers!
Nwoke a bu onye ife anya nke mageia. Kedu otu ọ ga - esi kwe omume na m ga - ede post banyere distros na ibu n'afọ ndị na - adịbeghị anya, ma gụnye nke na - ewere naanị 1 ... xD na ọkara gosi na ọ malitere ịkpọ m geia kemgbe 2010, mgbe a gụrụ mmetụta nke distro kemgbe ewepụtara ya , ọ bụghị site n'echiche. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ana m arịọ ka m tinye distro nke m, Indio Linux, nke tụụrụ ime maka afọ 5, mana ahapụbeghị m ya ma xDD (ọ dị mkpa iji mee ka ọ pụta ìhè?)
ajajajaj ị pụrụ ịhụ na amerịka bụ afọ 5…. pff dị ka maniulan xD..mageia enweghị gara aga, ọ nwere ọdịnihu, yabụ nke a bụ mgbasa ozi n'efu maka distro ahụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ APT na ndị dị otú ahụ mana ekwenyeghị na eserese eserese, mgbe ahụ Linux Mint ma ọ bụ Debian.
Anyị na-akwado ka ị gaa njem nke ‘Distros’ anyị: http://usemoslinux.blogspot.com/p/distros.html
Septentrion Zoster dijo
Achọrọ m ịkọwa na m bụ onye ọrụ nke Mandriva na mgbe e mesịrị nke Mageia. Eziokwu bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa 9 mụ na Mageia rụchara ọrụ. O bu ihe nwute, site na mmelite ha, ha na ekeputa nsogbu di egwu na netwok, mp3 audio and video drivers. Ya mere, ha na-emebi ihe malitere nke ọma. N'aka nke ọzọ, obodo Mageia Latina bụ ọgbakọ jupụtara na ndị mpako na-anaghị enye enyemaka ọ bụla. Kedu ihe kpatara na ha ekwesịghị ịkpọtụ Mandriva ma ọ bụ Mageia ebe a. Ha bụ distros na-emewanye nsogbu karịa uru. Ma ọ bụrụ na ịnweghị ịlele Intanet maka nsogbu nke iji disro a mee na netwọk. Na obodo naanị sọsọ na-asị "hahaha ọ bụghị nke ukwuu na m na-atụfu netwọkụ ma ọ bụ na ọ naghị amata akụkụ dị iche iche na qt na-ebute nsogbu na ọdịyo ma ọ bụ vidiyo" N'onwe ya Ọ BIST ỌB DR THAT NKE N'AGHACHI NA-EME KA Ọ B PR Nsogbu.
Zaghachi Septentrion Zoster
Ekwenyere m na Ramon, ka anyị kwuo maka Debian, nne nke ọtụtụ distros ...
Zaghachi na Pollolinux
Ọ dị mma nke ukwuu!
Clear na nkenke.
Nkwupụta bụ naanị azịza nke abụọ. 🙂
Na 23/07/2012 13:28 PM, «Disqus» dere, sị:
Achọrọ m ịkọwapụta okwu ole na ole, nke ka ukwuu site n'ịgụ ihe ndị a na-ekwu na echiche ndị nwere echiche doro anya nke ọma:
1- Isiokwu ahụ ga-etinyekwu nsogbu na mbido, mana ebe ọ bụ oge iji nyefee ọrụ na ihe ndị ọzọ na facu, anyị kwụsịrị ndị distros IHE MGBE. Dị ka Pablo si kwuo, na mbido ọ na-akọwapụta ndị na-efu efu nakwa na ọ ga-abụrịrị na akụkụ nke abụọ ga-ede ya na ndị na-efu efu, anyị na-arịọ maka ndidi 😛
2- Gini mere naanị 5 afọ gara aga na ọ dịghị ọzọ? N'ihi na anyị buru ụzọ leba anya na oge a ga-egosipụta ọnọdụ nke ọgba aghara ndị a dị ugbu a na otu ha si emetụta ụwa GNU / Linux. Enwere ike ime nyocha na afọ ndị gara aga, agbanyeghị na ozi ahụ na-adịkarị ụkọ ma a ga-agbatịkwu ọkwa ahụ ọtụtụ.
3- A na-etinye Mandriva n'ihi na n'agbanyeghị ọnọdụ ya ugbu a, TUPU IHE Ọ B HAD Ọ B OF N'HADLỌ NT TRTA. Mageia bụ "onye nọchiri ya," ọ bụ ezie na ọ nweghị ọtụtụ ndị ọrụ, ihe ọ pụtara bụ n'ihi ihe ọ rụpụtara n'oge na-adịbeghị anya yana mmekọrịta ya na Mandriva kemgbe.
4- Linux Mint bu uzo di omimi dika Ubuntu. N’isiokwu ahụ, Ọ B SPGH SP KWESECR SA KWES THATR THAT NA MINT KWURU UBUNTU NA USER QUOTA, mana na n’afọ 2011 ọ «na - anọchi Ubuntu na ogo nke ibe peeji nke
Distrowatch, na-agba akaebe na ụba mmụba nke Mint. Ihe a na-ewu ewu nke distro abụghị otu ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ: distro nwere ike ịbụ ihe a ma ama n'ihi nkwupụta emere na blọọgụ, ibe weebụ, nyocha, n'ihi ngosipụta onye ọrụ na ọgbakọ, site na ndụmọdụ, na ọtụtụ puku ụzọ ndị ọzọ , ọ naghị ekwu maka naanị ego eji eme ihe. Adịghị m onye ọrụ ARCH, mana amata m na ọ bụ ewu ewu n'ihi na ọ bụ otu n'ime nsogbu distros a kpọtụrụ aha na ọtụtụ mgbasa ozi Linux dị iche iche, dịka otu blog a 🙂 Ihe eji eme ihe n'etiti otu distro na onye ọzọ bụ oghere mbara igwe na echere m na ọ bụghị ọ ga-enwe ike ime ka ọ dị mkpụmkpụ, ma ọ dịkarịa ala n'oge dị mkpirikpi. Agbanyeghị, egosiri m na n'ọtụtụ ọgbakọ, ahụrụ m okwu a na - ekwu kwa ugboro ugboro "Ana m anwa Linux Mint n'ihi na m bụ onye ọrụ Ubuntu ma ugbu a enweghị m mmasị na ya n'ihi ntinye nke ịdị n'otu", nke a na - egosi na enwere ọchịchọ isi Ubuntu gaa Mint, nke ahụ na - ewepụta, na akụkụ, "mkpọtụ" nke Mint na-eme taa. Ọ bụrụ na onye ọ bụla atụgharịrị na Mint ma ọ bụ Ubuntu nwere mmasị karịa ibe ya, nke ahụ bụ nyocha onwe onye nke ọ bụla.
5- Debian ga-esonye na nyocha a, mana achọtabeghị ọtụtụ ozi, yabụ ekpebie iji mechie isiokwu ahụ. Ee, ọ bụ "nne" distro nke ụfọdụ n'ime ha edepụtara ebe a ma ya kwesiri ịnọ n'akụkụ nke abụọ nke edemede a, echegbula.
6- Amalitere m iji Linux na Ubuntu, mgbe ahụ, m gbanwere Linux Mint ma ugbu a na mgbakwunye Mint m na-ejikwa Fedora na OpenSUSE. Obere oge m nwalekwara Mageia. Amaara m site na ahụmịhe na onye ọ bụla nwere uru na ọghọm ya, na echiche zuru oke bụ na o kwesịghị ịbụ ọkwa, na ọ nweghị onye mmeri, kama kama nyochaa etu distro ọ bụla siri mee n'afọ ndị a wee hụ otu nke ahụ si metụta ọnọdụ ha ugbu a.
7- Banyere Ubuntu, ọ bụ ezigbo distro, na agbanyeghị na anaghị m eji ya, anaghị m agọnahụ ewu ewu ma ọ bụ mmetụta ma ọ bụ mkpa ọ nwere. Ke ibuotikọ ị pụrụ ịhụ nke ọma otú ọbụna dị iche iche òtù na-ahọrọ iji ma ọ bụ mejuputa ya na otú ọ na-iche iche na iche iche na ngwaahịa (Ubuntu TV, Ubuntu maka gam akporo, wdg).
8- Ihe edere na uche m ma onye ọ bụla nwere ike ghara ikwenye, onye ọ bụla nwere ezi echiche na echiche 😀
N'ihi otu esi dee edemede ahụ, a ga-ekwu na Mint karịrị Ubuntu n'ihe banyere ojiji na ewu ewu, mana… Kedu ihe ha na-adabere na-ekwu na Linux Mint bụ onye nwere nnukwu ewu ewu ma ọ bụ nwee oke oke? N'ihi ọnụọgụ nke Distrowatch? Ọ bụ na eziokwu na ikekwe m mejọrọ, anaghị m ahụ ya ebe ọ bụla, ana m enwe obi abụọ na Linux Mint karịrị Ubuntu na oke ojiji, lelee akụkọ dịka Steam, akụkọ sitere n'aka ndị nrụpụta na-agba nzọ na inye Ubuntu na ntinye, ozi banyere Ubuntu TV, na ndi ozo.
Linux Mint ahụ dị mma yana na ha amatala otu aga-esi adọta ọtụtụ ndị ọrụ na-achọghị ịma ihe ọ bụla gbasara mgbanwe mgbanwe nke gburugburu desktọọpụ nyere, enweghị m obi abụọ ọ bụla (lee na ọbụlagodi Firefox Mint na-eweta akara n ’Distrowatch ), ma echere m na ọ nwere ọtụtụ ihe ga - enwe ike dakọtara Ubuntu opekata mpe na ọnụọgụ ndị ọrụ na ewu ewu.
Kpọmkwem. Na Ubuntu ọ bịara na 11.04. Ihe ikwuru di na Ubuntu Netbook Edition, ya na Ubuntu abughi otu (ihe bu isi).
Francisco Verdeja dijo
Ọ bụ n'ezie na 10.10 dị ka nsụgharị maka Netbooks, ọ dị mma karịa ụdị nke bịara na Ubuntu 11.04, mana ọ bụ n'ezie ejighị n'aka maka iji Mutter, nke n'oge ahụ bụ ejighị n'aka, dị arọ na nwayọ window njikwa.
Zaghachi Francisco Verdeja
Okechukwu Ikpe dijo
Iji bụrụ onye ọrụ OpenSUSE, ekwesịrị m ịsị na n'ime ndị niile nyochara ya, ọ bụ nke ị jiri bụrụ xD kachasị nkenke.
Ọ dị mma, mmadụ, n'ihi na aha ahụ anaghị ekwu maka ndị nwere ibu arọ karịa n'oge a, mana ndị nwere ya n'afọ 5 gara aga.
Hehe paragraph paragraf nke mbụ na-eme ka ihe kpatara ya.
Ọ na-efu iji mee ka ọ pụta ìhè ma ọ hụrụ na ọtụtụ agụghị ya. Ugbu a ọ na-egosi na edo edo.
Ị nwetere ya! Edegharịrị m mmehie ahụ.
Lee anya na paragraf mbụ nke isiokwu a. N'ebe ahụ, ọ bịara doo anya ihe mere ha ji efu efu. Ha ga-abịa nke ugboro abụọ. Ọ gaghị ekwe omume ịme otu isiokwu na ALL distros ọnụ.
Isiokwu ahụ na-akọwa ihe kpatara Arch abụghị, otu Debian.
A na-atụfu Debian mana eziokwu bụ na ọ dịkarịa ala, e nwere ndị niile ga-anọrịrị nakwa na a maara ha n'ezie na mpụga Linux
Zaghachi ka tammuz
Wasdị n'otu ahapụghị na 10.04 ọ bụ na 11.04
Zaghachi na Carbestos
Ihe omimi dijo
na Arch? Site ugbu a gaa n'ihu m na-ewepụ ha na mmanya ibe edokọbara.
Kedu ihe mere ị ga - etinye ma ọ bụrụ na ọ bụ usoro ntụgharị, olee otu ị ga - esi nyochaa distro dị ka oge ya ma ọ bụrụ na ọ hapụghị nsụgharị kwesịrị ekwesị?
Echere m na Debian na-efu na ndepụta a, karịa ihe ọ bụla n'ihi na ọ bụ isi na mgbọrọgwụ (yana na elu%) nke distros ndị ọzọ dị ka Ubuntu ma ọ bụ Mint.
Ma ebe ọ bụ na anaghị m etinye aka na Linux ruo ogologo oge, ebe ọ bụ na 2009 ọ dịghị ihe ọzọ, anaghị m aghọta etu esi kpọọ Madriva (na ndụ Mageia ya) n'ihi na ha enweghị oke ibu ugbu a na Community, n'agbanyeghị na amaara m na ha nwere ya n'oge ahụ , ugbu a ha anaghị.
Ka o sina dị, isiokwu dị oke mma na nnukwu ọrụ nchịkọta.
Ezigbo ozi. Gini mere Arch adighi? O siri ike ịhazi, mana ọ kwụsiri ike, ọ na-arụ ọrụ.
Gịnị mere Arch? Kedu maka ụbọchị tupu 2007? redhat dị ochie dị ka debian… ..
Enwere Mageia na enweghị Arch, zuru oke ... / s
Ana m echere ozi ahụ na gentoo, sabayon, debian, LMDE.
Nwee menu Gnome 2 na Xfce na-etinyeghị ihe ọ bụla